Sida loo ciyaaro M2TS la Plex warbaahinta server -
1.3 M2TS in MP4 e
Sida loo ciyaaro M2TS la Plex warbaahinta server
Qeybta 1: Maxaad Plex warbaahinta server ma ciyaari karo m2ts?
Qeybta 2: Beddelaan M2TS in Plex qaab socon
Server Plex Media waa mid ka mid ah adeegyada ugu fiican si loo hubiyo in dhammaan qaabab waxaa lagu taageeray in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. Sidoo kale waa in la ogaadaa in sida ugu fiican in la hubiyo in warbaahinta Plex ee server ma ahan oo keliya ka shaqeeya habka ugu fiican lakiin sidoo kale uu helo natiijada la doonayo waa in la hubiyo in taageerada khabiirka website-ka rasmiga ah ee shirkadda waxaa browsed si user dhigan karaa forums iyo waxaa dhejin kartaa su'aalo.
Su'aal: Sidaas daraaddeed waxaan heysanaa ee .m2ts files ( Bluray luxay) maktabadda Plex aan, qaar ka mid ah faylasha waxay leeyihiin badan video durdurrada (faallo agaasimaha, horyaalka ugu weyn). Waxa ay u muuqataa sida Plex doorto webigu ugu horeysay ee horyaalka ugu weyn waxa wanaagsan lahayn, waayo, qaar ka mid ah files warbaahinta leeyihiin faallo agaasimaha ee sida durdur ugu horeysay si aan u tago si uu u daawado filimka oo Waxaan heystaa audio caadiga ah la il 480i of a faallo agaasimaha ee. Ma jiraa wax u sheegto PMS oo sii qulquli in ay isticmaalaan halkii file warbaahinta? Sidee ayaan u hagaajin karaa aan haya'ad oo dhan ee .m2ts files aan si meesha looga saaro durdurrada la rabin?
Waxaa jira jawaabo badan su'aashan oo ay tahay oo dhan sabab u ahaa xaqiiqada ah in madal Plex ma aha a mid yar iyo waxa ay leedahay mid ka mid ah taageero ugu fiicneyd abid. Jawaabta waxaa la siin doonaa foomka of dhibcood iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in meesha ugu fiican oo sida baahida iyo baahida dadka isticmaala ee lagu dabaqi karo si loo hubiyo in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaatada:
Files waa in la transcoded mar kale galay MKV ee MP4 weel oo ay jiraan laba faa'iidooyinka ugu waaweyn ee sidaas samaynaya. In meesha ugu horeysa user badbaadin doonaa meel iyo meel labaad user inay hubiyaan in qaab ugu badan ayaa loo doortay si ay u helaan shaqo lagu sameeyey hab sahlan oo toos ah ka dhigi doonaa.
Haddii arrimaha audio waxaa laga helaa files in lagu tilmaantay Tifaftirayaasha iyadoo la isticmaalayo habka kor ku xusan markaa user ay u baahan tahay in la hubiyo in DTS- ku HD qaab maqal ah waxaa loo isticmaalaa oo waxaa markaas la socotid weel MKV si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican gudahood lahayn waqtiga oo dhan.
3. Sida la soo dhaafay iyo xalka ugu fudud ee user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in URL http://www.videohelp.com/tools/tsMuxeR waxaa soo booqday xal faahfaahsan oo arrintan la xiriira iyo marka ay timaado http: // www .videohelp.com / qalabka / BDInfo markaas URL this sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah in arrintan la xiriira.
Part1: Maxaad Plex warbaahinta server ma ciyaari karo m2ts?
Mar kale taasi waa su'aal in uu leeyahay jawaabo dhowr ah oo sababaha isku way adag tahay in kuwan oo dhan ay qayb ka jawaabaan. Jawaabaha doonaa Sidaas darteed in laga jawaabo si aad u hesho aragti cad in dhibcood iyo qaybo ka mid:
Taageerada Plex Media ayaa taageero aad u yar ka baxsan codec.
Xaaladaha qaarkood user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in m2ts faylasha yihiin transcoded iyo media player Plex iyaga u ciyaari doono.
Waxaa sidoo kale ku taliyey in la hubiyo in qaab ku habboon oo warbaahinta Plex ee server taageeraya waxaa loo isticmaalaa oo file ah waxaa loo baddalaa qaab si ay u hubiyaan in loo maqli karo aan loo kala gooyey abid arrintan la xiriira.
Taageerada Plex TV sidoo kale waa wax ku ool ah si loo hubiyo in files m2ts yihiin diinta qaabab ku haboon oo waxaa sida caadiga ah la isticmaalayo kordhin .FLV ee arrintan la xiriira.
Forums Kuwaas waxaa ka mid ah kaalmo weyn u isticmaala oo ay hubiso in wixii kaloo la sameeyo waqti lahayn gudahood ka dhigi kara. Waxaa sidoo kale in la xuso in tutorial la su'aal ah oo uu soo si joogta ah posted on forums kala duwan sida Reddit oo ka mid ah forums Plex TV iyo jawaabaha su'aashan macaamiloon doonnaa badan yihiin in user a dalban kartaa wax kasta oo iyaga ka mid ah si ay u hubiyaan in ciyaartoyda ee m2ts soo gudbin gal TV Plex ee ma aha arin oo dhan. Waxa kale oo ay noo keenaysaa in meel kale oo ah in marka laga reebo Plex TV forums user ayaa sidoo kale booqan kartaa goobo kale si loo hubiyo in arrinta la xalin dhaqso suurto gal ah:
Part2: Beddelaan M2TS in Plex qaab socon
Wondershare Video Converter Ultimate Waa barnaamijka ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira taas oo ay tahay in la isticmaalo si loo helo natiijada ugu wanaagsan. Si aad u hesho wax ay xaq u user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in geedi socodka soo socda waxaa laga codsadaa sidii loo sharxay,
User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in URL http://www.wondershare.com/guide/video-converter-ultimate.html waxaa soo booqday si loo hubiyo in barnaamijka la soo bixi iyo mar loo sameeyo waa in la bilaabay:
User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in loo baahan yahay in video qaabka m2ts ayaa ku raran adigoo riixaya badhanka files add:
User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in qaab ku haboon waxaa markaas soo xulay si ay ugu fiican Plex Media ay taageerayaan qaab tusaale ahaan qaab mp4 loo isticmaalo:
Button diinta ayaa hadda in la weeraray si loo hubiyo in nidaamka la buuxiyo:
Talo khabiir ayaa sidoo kale loo isticmaali karo haddii user ee ma aha xubin ka mid ah kuwan forums sida login martida la abuuri karaa in arrimaha la xalin. Ayaa warbaahinta server Plex kale oo uu leeyahay hage ah oo uu soo daabacay online iyo wax kasta oo dadka isticmaala kuwa doonaya inuu u ciyaaro m2ts iyo ciyaartoyda mts hubiyo in arrinta la xalin iyaga u dhigi kara oo ay ka helaan heshiisyo ugu fiican waqti lahayn gudahood oo dhan. Waxaa jira tiro badan ayaa kordhin warbaahinta file labada audio iyo video taasoo ay taageereyso adeegan iyo user xaqa u baahan yahay si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo wax waqti ah gudahood oo dhan. Kordhin file waxa kale oo laga daawan karaa https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/203810286-What-media-formats-are-supported- iyo user ka heli kartaa ciyaaryahanka sida talo ah in ayaa waxaa la siiyaa.
Top Ten Best converters Tubada 8mm / Super 8 Video converters
Sida loo Dayactir file a AVI Broken ama qudhun
Sida loo Beddelaan AVI in M4V
Sida loo Beddelaan DV in MP4
Sida loo Download iyo Beddelaan YouTube in QuickTime MOV
> Resource > Beddelaan > Sidee u ciyaaro M2TS la Plex warbaahinta server